Ajụjụ - Yantai CMC Bearing Co., LTD.
Iburu mmebi na ihe mgbochi
N'ozuzu, ọ bụrụ na ejiri agba agba ahụ mee ihe n'ụzọ ziri ezi, enwere ike iji ya ruo mgbe ike gwụrụ ndụ. Otú ọ dị, enwere ike ịnwe mmebi na mberede tupu oge eruo, ọ gaghị enwe ike iguzogide ojiji. Kinddị mmebi n'oge a, na-emegide ndụ ike ọgwụgwụ, bụ oke ojiji eji akpọ ọdịda ma ọ bụ ihe ọghọm. Ihe na-akpatakarị ya bụ nrụnye akpachapụghị anya, ojiji, na mmanu, ihe ndị si mba ọzọ wakporo site na mpụga, yana ezughị ezu nyocha banyere mmetụta ọkụ nke akụ na ụlọ.
Banyere ọnọdụ mmebi nke amị, dị ka: jam nke mgbanaka na ọgịrịga nke ala na-ebu, enwere ike ịtụle ihe ndị a: ezughi oke mmanu, enweghị nkwekọ, ntụpọ na ntinye mmanụ na nsị mmiri, nsonaazụ mba ọzọ, na-ebu echichi njehie, shaft deflection Ọ bụrụ na song bụ oke ibu, ihe ndị a ga-yitewere.
Ya mere, o siri ike ịmata ezigbo ihe kpatara mbibi naanị site na nyocha na-emebi emebi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị maara igwe eji, ọnọdụ ojiji, ihe owuwu gburugburu na-agba, ọnọdụ tupu na mgbe ihe mberede ahụ, jikọtara ya na ọnọdụ mmebi nke iburu na ọtụtụ ihe, ị nwere ike igbochi ụdị ihe ọghọm ahụ ịme ọzọ.
Ọtụtụ nsogbu kwesịrị ntị ka na-amị echichi
a. Okpukpo nke oghere dị n'ime na n'èzí ga-adakọrịrị, na myirịta dị n'etiti akụkụ abụọ nke spacer ekwesịghị ịgafe 0.002mm.
b. A ga-ahọrọ nrịba. Ihe dị iche iche dị n'ime na nke dị iche iche nke otu ọhụụ nke biarin kwesịrị ịdị n'etiti 0.002 mm na 0.003 mm, ma debe ya n'etiti 0.004 mm na 0.008 mm na oghere ụlọ na n'etiti 0.0025 mm na 0.005 mm na akwụkwọ akụkọ ahụ. Na ntinye n'ezie, ọ kachasị mma itinye ntụaka ahụ na mkpịsị aka aka abụọ.
c. ihe Gburugburu oghere oche na-ebu na akwụkwọ akụkọ ahụ, coaxiality na nsọtụ abụọ nke oghere ụlọ, na radial runout nke akwụkwọ akụkọ ekwesịghị ịgafe 0.003mm.
d. Ihu ngwụcha nke akụkụ ndị metụtara kọntaktị na njedebe ihu nke mgbaaka na-ebu kwesịrị ịdị na-acha maka nyocha, na ebe ịkpọtụrụ ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 80%.
e. Ga-arụnyere directionally. Nke ahụ bụ, ebe kachasị elu nke radial runout niile na-agba mgbaaka dị n'ime kwekọrọ na nke kachasị dị ala nke akwụkwọ akụkọ radial runout, na ebe kachasị elu nke radial runout nke na-agba mgbaaka dị n'èzí kwesịrị ịdị na akara kwụ ọtọ mgbe etinyere ya na oghere ụlọ.
Mmetụta nke ike na ndụ mgbe ị na-achịkọta ma na-ekewasị ihe na-agagharị
Enwere ike inwe ọtụtụ ihe na - emetụta ndụ ọrụ nke biarin, nke enwere ike ịkọwapụtakwu site na iji ihe na ihe dị n'ime.
Ihe eji ya eme ihe na-ezo aka na ngbanwe nrụnye, ojiji na mmezi, mmezi na nrụzi zutere ihe ndị chọrọ ọrụ. Dị ka teknụzụ chọrọ nke Rolling amị echichi, ojiji, mmezi na mmezi, ibu, ọsọ, na-arụ ọrụ okpomọkụ, vibration, mkpọtụ na lubrication ọnọdụ nke na-agba agba agba na-nyochaa na-enyocha. Ọ bụrụ na achọtara ihe na-adịghị mma, a ga-achọpụta ihe kpatara ya ozugbo wee gbanwee ya ka ọ laghachi na nkịtị. Ọnọdụ nrụnye bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi na ihe eji eme ihe. Ihe na-ebugharị na-abụkarị nrụnye na-ezighi ezi, nke na-eme ka ọnọdụ nrụgide nke akụkụ dị iche iche nke mgbatị ahụ gbanwee. Ihe nketa ahụ na-aga n'ọdịdị na-adịghị mma ma mechie ndụ ọrụ ya n'isi.
Nnukwu ma ọ bụ obere ike a na-etinye n'ọrụ mgbe ị na-etinye ihe nrụpụta ahụ ga-emetụta arụmọrụ na ndụ nke mgbatị ahụ, ma na-ebibi mmebi ahụ. Ihe ndị a bụ ndụmọdụ anọ dị mkpa ka a attentionaa ntị na ya na itinye n'ọrụ.
1. applieddị arụ ọrụ etinyere kwesịrị ịdị ike ma dịrị n'otu, na-enweghị mmetụta. Nke a chọrọ iji mmanu mmanu ma ọ bụ ngwaọrụ nwere ike itinye ike na-adọrọ adọrọ ma ọ bụ nrụgide. Mgbe hammering dị ezigbo mkpa, a ga-agafe ya na aka nchara nchara. A na-agbanye ọla na-ada ada, ike ahụ na-adọrọ adọrọ dị nwayọ dịka o kwere mee. Ọ kachasị mma iji mkpanaka ọla kọpa ma ọ bụ ọla kọpa maka hama.
2. Ntinye nke ike kwesiri ịga n'ihu ruo mgbe arụchara ọrụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe etinyere agba ahụ, a ga-akwụsị ngwa nke ike mgbe etinyere agba ahụ n'ọnọdụ ziri ezi iji hụ na ihu ihu mgbanaka ahụ (ihe nchara) megidere oghere oche ma ọ bụ ihu ihu nke ọdụ ahụ. ubu, apughi kwa ya apia. Ọ kpara oke ike ịbanye ebe.
3. Nsonaazụ nke ike a rụpụtara gafere axis nke na-ebu ka o kwere mee, nke na-achọ ka ntinye ihe eji eme ihe bụ otu, nke na-eme ka ọ dị mma ma kwụsie ike, a na-etinye ike ahụ site na gburugburu akụkụ ma ọ bụ kwekọrọ na axis.
4. Zere itinye ike site na ihe na-agagharị, nke chọrọ itinye ike site na mgbanaka dị n'ime mgbe ị na-ezukọ ma na-agbasasị mgbanaka dị n'ime (mgbanaka mgbanaka), na itinye ike site na mgbanaka mpụga mgbe ị na-ezukọ ma na-agbasasị mgbanaka mpụga.
Kedu ihe m kwesịrị ị paya ntị na mgbe ị na-etinye ma na-agbasasị ebe a?
(1) Ihe na-esi na ya pụta nke ike a na-etinye na-agabiga na axis nke na-ebu ya ka o kwere mee, nke chọrọ ka ngwa ngwa ahụ dịrị n'otu, nwee mmetụta ma kwụsie ike, na-etinye ike site na gburugburu ma ọ bụ na-atụgharị na axis.
(2) Ike a na-etinye n'ọrụ kwesịrị ịdị ike ma bụrụ otu, na ekwesịghị itinye ya n'ọrụ. Nke a chọrọ iji mmanu mmanu ma ọ bụ ngwaọrụ nwere ike itinye mgbatị ma ọ bụ nrụgide kwụsiri ike. Mgbe hammering dị ezigbo mkpa, a ga-agafe ya na aka ọla kọpa dị nro. A na-agbanye ọla na-adaghị ada, ike pụtara ìhè dịkwa nwayọ dịka o kwere mee. Ọ kachasị mma iji mkpanaka ọla kọpa ma ọ bụ ọla kọpa maka hama.
(3) Zere itinye ike site na ihe ndị na-agagharị, nke chọrọ itinye ike site na mgbanaka dị n'ime mgbe ị na-achịkọta ma na-agbasasị mgbanaka dị n'ime (mgbanaka mgbanaka), na itinye ike site na mgbanaka mpụga mgbe ị na-ezukọ ma na-agbasasị mgbanaka mpụga.
(4) Ike adọkpụpụta kwesịrị ịga n'ihu ruo ókè o kwesịrị. Dịka ọmụmaatụ, mgbe etinyere agba ahụ, a ga-akwụsị ike ahụ mgbe etinyere mgbatị ahụ n'ọnọdụ ziri ezi iji hụ na njedebe nke mgbanaka ahụ (onye na-ehichapụ) abuts megide elu njedebe nke oghere oche ma ọ bụ ubu nke aro. Enweghị ike ịpịkọta ya ọnụ, ma ọ bụ tinye ya na ezighi ezi.
Okwu ndị chọrọ nlebara anya na ntinye ntinye
1. A naghị anabata ya ka ọ ga-egwu ala, uzo, chamfer, ma ọ bụ ihu njedebe ụgbọ ala na-ebu ya n'oge nrụnye. Ma ọ bụghị ya, ọ dị mfe ime ka nrụrụ nke mgbanaka na-ebu, nke na-emetụta izi ezi na ndụ nke agba. N'otu oge ahụ, ígwè ahụ a na-egbutu na-abanye n'ụzọ dị mfe na-arụ ọrụ nke na-ebu ya, na-eme ka ejiji nke ọsọ ọsọ na ihe ndị na-agagharị agagharị, na-emebikwa ngwa ngwa na-ebili.
2. A naghị enye ya ohere iji kpoo mgbanaka aka na mgbanaka aka mgbe a na-etinye ya. Ntụziaka ihu ihu nke amị arụnyere nso na aro ubu n'ime. A na-amata ọdịiche nke nrụtụ aka dị elu nke agba dị ka a na-ede ma ọ bụ na ọ bụghị. N'ihi na miri uzo bọl biarin, onwe-kwado bọl biarin, cylindrical ala biarin, * Tụkwasị na ala biarin na agịga ala biarin, ọgwụgwụ elu na-enweghị akwụkwọ ozi na-eji dị ka akwụkwọ ahụ elu; angular kọntaktị N'ihi na biarin biarin na tapered ala biarin, na njedebe ihu na akwụkwọ ozi na-eji dị ka akwụkwọ.
3. A ga-etinye nrụgide ahụ na ihu njedebe nke mgbanaka ahụ na nnyonye anya nrụnye kwesịrị ekwesị n'oge echichi, ya bụ, mgbe arụnyere ya na aro ahụ, a ga-etinye nrụgide ahụ na njedebe njedebe nke mgbanaka dị n'ime; mgbe arụnyere na oghere nke na-ebu ụlọ, a ga-etinye nrụgide ahụ n'èzí na-agba ihu Circle ọgwụgwụ ihu. A naghị ekwe ka ịgafe nrụgide site na ihe ndị na-agagharị ma jide.
4. Maka nkedo nke nwere nkedo siri ike nke mgbanaka dị n'ime ya na ihe nkedo nke mgbanaka dị n'èzí, mgbe ị na-etinye, ụdị nke na-abụghị nkewa kwesịrị ibu ụzọ wụnye eriri na eriri ahụ, wee wụnye osisi ahụ na iburu n'ime ụlọ ahụ. oghere nke ụlọ na-ebu; Maka ụdị nkewa, enwere ike itinye mgbanaka dị n'ime na nke dị iche iche.
5. Iji gbochie ntinye nkedo na-agbadata, eriri nke etiti nke oghere na oghere oghere ga-adaba n'oge echichi. Ọ bụrụ na echichi ahụ ezighi ezi, a ga-amịpụ ihe ahụ site na njedebe ihu nke mgbanaka dị n'ime mgbe achọrọ nrụnye. Ma arụnyere arụnyere n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ na ọ bụghị nwere mmetụta kpọmkwem na ndụ ya na izi ezi nke isi engine. Ọ bụrụ na arụnyere ya n'ụzọ na-ezighi ezi, ihe dị na ya agaghị enwe naanị mkpọtụ, mkpọtụ dị elu, obere izi ezi, nnukwu ịrị elu okpomọkụ, kamakwa ihe egwu nke ịrapara na ọkụ; na ntụzịaka, ọ bụrụ na arụnyere ya nke ọma, ọ ga - eme ka ọ ghara izi ezi, mana ọ ga - agbatịkwu ndụ ya. Ya mere, mgbe etinyere agba ahụ, a ghaghị inyocha ya.
Echichi nke tapered ala biarin
Gbanwe axial nwechapụ N'ihi echichi axial nwechapụ nke tapered ala biarin, i nwere ike iji ukpụhọde aku na magazin, ukpụhọde washer na eri na agba oche oghere, ma ọ bụ jiri pretension mmiri ka ịhazie. Ogo nke nkedo axial metụtara nhazi nke mbugharị, ebe dị n'agbata bearings, na ihe nke osisi na oche na-ebu, a pụkwara ikpebi ya dịka ọnọdụ ọrụ si dị.
Maka mpempe akwụkwọ mpịakọta nwere nnukwu ibu na nnukwu ọsọ, mgbe ị na-agbanwe nwechapụ ahụ, a ga-atụle mmetụta nke ịrị elu okpomọkụ na axial axial, yana Mbelata nhichapụ nke ịrị elu okpomọkụ ga-eme atụmatụ, ya bụ, axial nwechapụ Ọ kwesịrị ịgbanwe ka o buru ibu.
Maka obere ọsọ na-agba ọsọ na ịma jijiji, nnyefe enweghị nnabata ma ọ bụ ntinye ebu ibu kwesịrị ịnabata. Ebumnuche ya bụ ime ka rollers na raceways nke tapered roller bearings na-eme ezi kọntaktị, ọbụnadị kesaa ibu ahụ, ma gbochie ndị na-agba ọsọ na ọsọ ọsọ ka ha ghara imebi site na ịma jijiji na mmetụta. Mgbe emezigharị, a na-enyocha nhapụta nke axial na akara ngosi.
Ala Pin biarin, Nrụgide oru Roller biarin, Inch Single Ahịrị, Self-kwado Ball agba, Full Complement Ball biarin, Taper ala agba Ndokwa,